The Irrawaddy's Blog: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ BBC အင်တာဗျူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ BBC အင်တာဗျူး
BBC မှာ တင်ထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဂျွန် ဆင်ပဆင်တို့ရဲ့ အင်တာဗျူးပါ။
Posted in: ရုပ်သံ , Interview , Video , Youtube , အင်တာဗျူး
Phone Z. Phyo said... :
"I would like them to be the heroes, why not?"
We have had too much hate in our country.
We should not be hating anyone any more.
Let them be the heroes and heal the wounds.
ပြည်တွင်းဂျာနယ်မှ ကွန်မန့် ကို တဆင့် ပြန်လည်တင်ပြသည်။ NLD လုံခြုံေ၇းမှသတင်း ထောက်အ၀င်မခံတဲ့ ကိစ္စ ကို လိုက် အပုတ်ချ သတင်းဖြန့် ချက်ကို အချို့ ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် မှ ကွန်မန့် တွင် ပြန်လည်ပြောပြချင်း အဖြစ်မှန်
NLD အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု ကည်ရဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စကို ပေါ့ပေါ့ဆဆမလုပ် စေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် သတင်းထောက်ဖြစ်ြ ဖစ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် အရမ်းမယုံပဲ လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ဘယ်သူ့ ကိုမဆို လုပ်သင့်ပါတယ်။ အခုပဲ ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို သိရတယ်။ ဒီနေ့ နေ့လည်တစ်နာရီကျော်လောက်က ရွှေဂုံတိုင်က အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခ န်းထဲမှာ ELEVEN က သတင်းထောက်ဆိုပြီး လူတစ်ယောက် ဓါတ်ပုံဝင်ရိုက် တယ် (ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူက တစ်ကယ် Eleven ကမဟုတ်ဘူး)။ဒေါ်ေ အာင်ဆန်းစြု ကည်လည်း ရုံးခန်းထဲမှာပဲ ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်ကယ့် ELEVEN သတင်းထောက်က အခြား ပြည်တွင်းပြည်ပသ တင်းထောက်အချို့ နဲ့အတူ အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်။ အယောင်ဆောင်ရောက်နေတဲ့ ကိစ္စကို သိတာနဲ့ Eleven သတင်းထောက်က ကျွန်တော်တို့ Eleven ကဆိုရင် ၀န်ထမ်းကတ်ပြားပါတယ်။ စနစ်တစ်ကျ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နိုင်တယ်။ လိုအပ်ရင် Eleven Media Group ကို ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်တယ်။ Eleven ကဆိုတိုင်း တစ်ကယ်မဟုတ်ဘဲ အယောင်ဆောင်လာသူ တွေကို မယုံဖို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ အဲ့ဒီတော့မှ စောစောက Eleven ကဆိုပြီး အယောင်ဆောင်လာသူ ကို အဖွဲ့ချုပ်တာဝန် ရှိသူတွေက ပြန်ထွက်သွားခို င်းလိုက်တယ်တဲ့။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေ ကို သတိထားရတော့မယ်။ ဒါဟာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။
ကဲ peacock_union ရေ .. ခင်ဗျားပြောသလို နဲ့တော့ လွဲနေပြီ။ NLD အနေနဲ့ လုံခြုံရေးအရ ဆောင်ရွက်တာတွေမှာ ဘာကိုမှ အားနာစရာမလိုပါဘူး။ အခုလို အယောင်ဆောင်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဒါမှမဟုတ် နီးစပ်ရာ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားဝင် အကြောင်းကြားရမယ်။ တိုင်ကြားရမယ်။ လိုအပ်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည်လုံခြုံရေးအ တွက် အကူအညီတောင်းခံသ င့်တယ်။ တစ်ကယ်လို့ မပြောကောင်းမဆို ကောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည်သာ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရ င် ပြည်သူလူထုရော၊ အစိုးရအတွက်ပါ အများကြီးထိခိုက်နစ်နာသွားမှာပါ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကိုလည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် နေ့တိုင်း ရွှေဂုံတိုင်က အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ရုံးမထိုင်စေချင်ဘူး။ NLD အနေနဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စကို သေသေချာချာ လုပ်သင့်ပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးက သတင်းဌာနတွေ အရမ်းအင်တာဗျူးချင်နေချိန်မှာ ဘီဘီစီကုို ပထမဆုံး အင်တာဗျူးခွင့် ပေးလုိုက်တာ ဘီဘီစီအတွက် ကောင်းပါတယ်.. မြန်မာစာနယ်ဇင်းတွေလဲ လူရှိန်သူရှိန် ကုိုယ့်မြန်မာတွေပဲ ကုိုယ်ရှိန်ပီး လေးစားအောင် ကြိုးစားရဦးမယ်.. ဘီဘီစီလိုပဲ နိုင်ငံခြားက လူကတောင်လှမ်းပီး ဦးစားပေး ဖြေတာမျိုး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ.. ခုတော့ အနီးကပ်ပီးတောင် လစ်လျူရှုခံနေရတာ ကြိုးစားမှု ဘယ်လောက်လုိုတယ်ဆုိုတာ သိသာပါတယ်.. အအော်အငေါက်ခံ အဆင့်ပဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား..
any one can translate in detail so that every body who are not familiar with English language can know in detail?
Aunty Su, i really like the way you answer and you are very wise and sharp. I can see you are sincere. i am really proud of you being our lead of democracy. you are not only educated but also wise.
you are hero of mine. I also like the way you speak english. I promise you I am gonna improve my english.
bluebird said... :
this 24 minutes video link would be better and more comprehensive. Please irrawaddy, if possible, post this video on your blog. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11762224
we admire your courage
we revere your sincerity
we accept your lead
promise that we will follow your footprints
CNN နဲ့ဒေါ်စု interview ရှိရင် link ပေးကြပါအုံး thanks